Iwu Mbupu - Popular Jewelry
Mbupu Mbupu N'ụlọ (United States)
Nwee obi ụtọ maka mbugharị ụgbọ njem ụgbọ ala (USPS First Class) na iwu $ 100 ma ọ bụ karịa.
Ozi Mbupu General
Biko kwe ka ụbọchị azụmaahịa 3-5 maka nhazi na nkwenye. Kwe ka ubochi 7-10 nke ahia maka izipu ulo.
Anyị anaghị ahụ maka ụgbọ mmiri ọ bụla furu efu, nke zuru ohi, ma ọ bụ mebiri emebi. A na-akwụ ụgwọ mbupu ụgbọ mmiri niile ma onye na-azụ ahịa na-eburu ibu ọrụ nke onye kwuru maka onye na-ebupu ụgbọ mmiri.
Maka ebumnuche nchekwa, anyị nwere ike ibuga naanị adreesị enyere na ndenye ọpụpụ.
Maka ebumnuche nchekwa, anyị nwere ike ghara igbochi ngwugwu ma ọ bụ gbanwee nnyefe ya ozugbo e nyefere ya n'aka onye ebu ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ozi ọ bụla maka iwu (adreesị / ụgwọ ụgwọ, ozi ịkwụ ụgwọ, wdg) ị nwere ike ịrịọ kagbuo iwu gị site na ịkpọtụrụ anyị ozugbo na info@popular.jewelry. Ọ bụrụ na akagbuola iwu gị nke ọma, ịnwere ike itinye usoro ịtụgharị ọhụụ.
Amụma anyị dịruru ụbọchị iri na ise ka ụbọchị mbupu ahụ gasịrị. Ọ bụrụ n’abalị iri na ise agafeela kemgbe anyị zigara ngwugwu gị, anyị enweghị ike ịkwụghachi nkwụghachi ma ọ bụ mgbanwe.
Mpempe akwụkwọ eji eme ihe dịka mpempe aha, akara aha, na ezé wdg abụghị ihe a na-akwụghachi ma agaghị adị maka iji ya dị ka akwụmụgwọ ụlọ ahịa. Nhazi ya na mgbanwe ya (wdg ihe osise na mgbaaka; olu ịregharị ọla) na ibe ga-emebi iwu nlọghachi. Anyị ga-agwa gị tupu oge ịzụta ma ọ bụrụ na edepụtara ihe dịka.
Ihe ndị eweghachiri ga-akwụ ụgwọ ego nkwụghachi ụgwọ 15% nke a ga-ewepụ site na nkwụghachi. Ego akwụ ụgwọ maka mbupu.
Iji ruo eruo maka ịlaghachi, a ga-etinyekwa ihe gị n'otu ọnọdụ ị natara ya. A ga-etinyerịrị nkwakọ ngwaahịa mbụ yana nke enyemaka ọ bụla (ma ọ bụrụ na ọdabara).
refunds (ọ bụrụ na ọdabara)
Ozugbo anabatara ma nyochara nloghachi gị, anyị ga-ezitere gị ozi email iji gwa gị na anyị anatala ihe ndị ahụ. Anyị ga-emekwa ka ị mara nnabata ma ọ bụ ịjụ nkwụghachi gị.
Nkwụghachi azụ ma ọ bụ na-efu (ọ bụrụ na ọdabara)
Ọ bụrụ na ịnabataghị nkwụghachi n'ime otu izu nke nkwụghachi nkwenye, biko kpọtụrụ ụlọ akụ gị na ụlọ ọrụ kaadị kredit / PayPal. Oge nhazi maka nkwụghachi nwere ike ịdị ogologo; Ọ nwere ike iwe oge ụfọdụ tupu ezighachi nkwụghachi gị.
Ọ bụrụ n’ịgbaso usoro a ma enwetabeghị gị ma ọ bụ naraghachi gị, biko kpọtụrụ anyị na rarejewelrycorp@gmail.com.
Ahịa ihe (ọ bụrụ na ọdabara)
Naanị ihe ndị a zụtara na ọnụ ahịa ụlọ ahịa mgbe enwere ike ịkwụghachi. Nzụ ahịa anaghị ere ahịa.
Exchanges (ọ bụrụ na ọdabara)
Anyị na-edochi ihe naanị ma ọ bụrụ na ha nwere nkwarụ ma ọ bụ mebie. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji dochie anya, zitere anyị email na info@popular.jewelry ma zipụ ihe gị na Ọdụ ụgbọ 255B New York, New York US 10013. Mgbanwe adịghị n'okpuru ụgwọ nkwụghachi 10%.
Ọ bụrụ n’inye akara dị ka onyinye mgbe azụtara ma zụta gị, ị ga-enweta otuto zuru oke maka nloghachi gị. Ozugbo enwetara ihe ahụ alọghachite, a ga-ezitere gị akwụkwọ onyinye.
Ọ bụrụ na egosighi akara ya ka ọ bụrụ onyinye n'oge azụtara ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na onyinye nyere ya n'aka ka o kesara gị, anyị ga-ezitere onye nnochite ego na ọ ga-aza ajụjụ maka njikwa ahụ. nke kredit / onyinye onyinye.
Iji weghachite ngwaahịa gị, biko kpọtụrụ anyị na info@popular.jewelry site na iji nọmba wee "Nlaghachi" na isiokwu ahụ. Agbanyeghị na odighi mkpa, ị nwekwara ike tinye ihe kpatara nloghachi (anyị na-agba mbọ imeziwanye ọrụ anyị, ana anabata anyị nzaghachi!)
Ozugbo akwadola nloghachi ahụ, ụgbọ nloghachi na adreesị na-esonụ:
255 Ọdụ ụgbọala Street B
Ga-ahụ maka mbupu ụgwọ akwụ ụgwọ maka nkwụghachi. Gwọ Mbupu n'oge nzụta enweghị nkwụghachi (ọ bụrụ na akwadoro akwụkwọ nzipu ozi site na nhọrọ nnabata n'efu na-akwụ ụgwọ a na-agaghị ahụkarị gị; a ga-agwa onye ahịa maka mbelata tupu nkwụghachi.)
Ọ bụrụ na anyị nye gị akara mbupu, a ga-ewepụ ego nkwụghachi ụgwọ na nkwụghachi gị.
Oge ọ na-ewe maka ihe agbaziri agbaziri / gbanwere gbanwere dabere na ọnọdụ gị. Anyị ga-enye gị ozi nsuso n’oge mbupu (ọ na-abụkarị site na ozi-e) ma ọ kwe omume.
Ọ bụrụ na ị na-ebupu ihe bara uru karịa $ 50 tụlee iji ọrụ mbupụ traceable na ịzụta mkpuchi maka ngwugwu gị. Anyị enweghị ike ịkwado na anyị ga-enweta nloghachi gị. Nwere ike ịrịọ ka anyị nye gị akara mkpuchi mkpuchi a kwuru (lee n'elu maka nkwụpụ ụgwọ ụgwọ site na nkwụghachi gị.)